ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် မြစ်ဆုံအပါအဝင် ဆည်တမံမျး ဆောက်လုပ်ခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း မိုးလေဝသပညာရ? - Yangon Media Group
ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် မြစ်ဆုံအပါအဝင် ဆည်တမံမျး ဆောက်လုပ်ခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း မိုးလေဝသပညာရ?
ဧရာဝတီ မြစ်ပေါ်တွင် မြစ်ဆုံအပါအဝင် ဆည်တမံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောသည်။ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က ဒဂုံ မြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်ရှိ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) သုခခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ဧရာဝတီချစ်သူများ၏မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအားအများပြည်သူသဘောမတူဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ကြောင်း ပညာရှင်များဟောပြောပွဲ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်က “အခုနောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေ ပြောတာက မြစ်ဆုံမှာဆောက်မယ့် ရေကာတာရဲ့အရွယ်ကို သေးလိုက် ရ မလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားတစ် နေရာရာကိုအစားထိုးပေးမလား စဉ်းစားနေပါတယ်လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်အ နေနဲ့တော့ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှာ ဆောက် လုပ်မယ့်ဆိုရင်တော့မူ အားဖြင့်တော့ ဘယ်ဟာမှကိုမ ထောက်ခံပါဘူး။ မြစ်ဆုံဆိုရင်တော့ ရာနှုန်းပြည့်မထောက်ခံပါဘူး။လုံးဝကိုဖျက်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအရွယ် အစား(သို့မဟုတ်)နေရာပြောင်းလဲ နိုင်ရေးညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံ ခြားစီးပွားဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်း ထွန်းက ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးအ ပတ်တွင် ပြောကြားမှုများရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဦးထွန်းလွင်က”မြစ်ဆုံဆည်ကိုအပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းဖို့လိုပါတယ်။လူထုရဲ့အသံကို အပြည့်အဝနား ထောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။ ရေကာတာကြီးများတည် ဆောက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာမြစ်ကြီးများတွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အပြောင်းအလဲများမှာမြစ်များ၏ ရာသီအလိုက် စီး ဆင်းပုံနှင့်နေ့စဉ်ရေစီးရေလာအ နေအထားပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ မြစ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အစိတ်အြွမာ ပြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ရေအရည် အသွေးပြောင်းလဲခြင်း၊ မြစ်အောက် ပိုင်းနုန်းကျမှုလျော့လာ၍ ကမ်းပါး တိုက်စားမှုများဖြစ်လာနိုင်ခြင်း၊ ဇီဝ စုံလင်ကွဲပြားမှုလျော့ကျခြင်း၊ မြစ် ဝှမ်းဒေသသယံဇာတနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းများဆုံးရှုံးနိုင် ခြင်းများကို ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မောင် မြင့်ဇော်(သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့် သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုပါရဂူ)က”သဘာဝရေစီးရေလာဟာ မြစ် တစ်ခုရှင်သန်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ် ချက်ပါ။ မေခ-မလိခရဲ့ရေစီးရေ လာကိုမြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ရာနှုန်း ပြည့်ထိန်းချုပ်လိုက်တာ၊ ရလဒ်အ နေနဲ့ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ရေစီးရေလာကို ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းက ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိထိန်းချုပ်သလိုဖြစ်သွားမှာ တွေဟာဧရာဝတီကိုအသက်ငင် စေမယ့် အခြေအနေတွေဖြစ်ပါ တယ်။ မြင်သာလာမယ့် ထိခိုက်မှုတွေကရေစီးရေလာပြောင်းလဲတာ၊ မြစ်ကြောင်းရုပ်သွင်ပြောင်းလဲ တာ၊ နုန်းသယ်ယူမှုပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ အဆိုပါပွဲကို ဒေါက်တာထွန်း လွင်(မိုးလေဝသ)၊ ဒေါက်တာ ခင် မောင်ညို၊ မောင်စိန်ဝင်းပုတီးကုန်း (စာရေးဆရာ)၊ မောင်မြင့်ဇော် (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သယံ ဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုပါရဂူ) တို့က ဟော ပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဂတိလိုက်စားခဲ့သော ဥပဒေအရာရှိတစ်ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်?